गंगा जस्तै पवित्र हुन्छन् यी राशिका युवती,कहिलै सोच्दैनन् कसैको कुभलो ! – Online Khabar 24
गंगा जस्तै पवित्र हुन्छन् यी राशिका युवती,कहिलै सोच्दैनन् कसैको कुभलो !
हिन्दू धर्ममा सबै युवतीलाई माता लक्ष्मीको रुप मानिने गरिन्छ। देवीको रुपमा पूजा हुने महिलालाई कयौँ पटक आफ्नो पवित्रता देखाउनका लागि कडा तपस्या पनि गर्नुपरेको शास्त्रमा उल्लेख छ।
आज हामी केही यस्ता राशिका युवतीको बारेमा जानकारी दिदैछौँ । उनीहरुलाई गंगा जस्तै पवित्र छन् भन्दा कुनै पटक पर्दैन। सुन्दरताको कुरा गर्नुपर्दा पनि यिनीहरु निकै आकर्षक देखिन्छन्। आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती राशि?
सौर्यमण्डलका ग्रहहरूले मनुष्यको जीवनलाई धेरै प्रभावित पार्छन् । प्रत्येक दिन व्यक्तिले ग्रहको हिसाब अनुसार निधारमा चन्दन लगाउँदा शुभ फल प्राप्त हुन्छ । चन्दन निधारमा लगाउँदा शीतलता प्राप्त हुन्छ र पापहरूको नाश पनि हुन्छ । घरमा चन्दन राख्दा त्यसको सुगन्धले नकारात्मक ऊर्जा पनि नष्ट हुन्छ ।
ज्ञान, बुद्धि र संगीतकी देवी सरस्वतीको हातमा वीणा अवश्य हुन्छ । पुराणहरूका अनुसार देवी सरस्वतीलाई कमलको फूलमा बसेको अनि हातमा वीणा समातेको देखिन्छ । कमल हिलोमा फुल्छ तर उसलाई हिलोले छुँदैन । उहाँको चित्र घरमा राख्दा पनि फल पाइन्छ । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevऋणबाट मुक्त हुन घरको यो स्थानमा राख्नुहोस मयुरको प्वाँख !
nextअाज कुनै काम गर्नु अघि जान्नुस अाज कात्तिक ९ गते मंगलबार तपाईको भाग्य कस्तो छ ?